Kersaint-Plabennec - Mvura yakadzika. Basa rokudzorera rakaitwa - TELES RELAY
HOME » VANHU & VANHU »Kersaint-Plabennec - Mvura yakadzika. Basa rokudzorera rakaitwa
Kersaint-Plabennec - Mvura yakadzika. Basa rokudzorera rakaitwa
Muongorori wemvura yakawanda Ronan Allain, (pakati nepakati pemapatipa) anotsanangurira vamiriri vasarudzo vekuchengetedzwa kwemagariro eCACPA, basa rakagadzirwa.
Sechikamu cheBen Benoît chibvumirano chemuganhu wemvura chinoitwa neCommunity of communes yeAlers nyika (CCPA) uye mari inobhadharwa neMvura Agency, Dhipatimendi reFinistère neBrittany, basa rekudzorera nzvimbo dzakadzika mumvura dzaiitwa. Inonyanya kunetseka nekudzorerwa kwezvinyorwa zvekutengesa uye hove pamigodhi duku.
Uyu musi weChishanu, vatungamiri vakawanda vakasarudzwa veCACPA vakaenda kuKersaint-Plabennec pamusangano waAber Benoît uye kurwisana kweKerarias uko mabasa akawanda akaitwa. Mukana wekambani yeCCPA's waterhed, Ronan Allain, kuti ataure matambudziko ane chokuita nezvivako izvi uye mikana yakasiyana yebasa. Basa rakaitwa pamusango wezvipingamupinyi izvo zvipingamupinyi zvekuve hove dzakadai seboka remvura, kusvika kune dzinharaunda.
Zvinopfuura 27 000 € inoshanda
Kugadziriswa zvivako zvakagadziriswa munzvimbo, maitiro matsva ave akashandurwa zvakare. Basa rakadzoswa zvakare pamusoro pe5 km yemvura. Chimwe chidiki chekudzorerwa kwebhedha rekuchera chakange chakaitwa pamusoro pe 60 m yemisasa uye mabasa akawanda ekugadzirwa kwebhangi yemiti yakaitwa. Pakupedzisira, mapfupa gumi nemasere emasango akashandiswa kuve varimi veCACPA kuti vasadzivirire zvakakwana zvipfuwo kumvura. Basa racho rinodhura 27 690,50 € HT mari yeHNUMX% neAELB nedhipatimendi
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.letelegramme.fr/finistere/kersaint-plabennec/milieux-aquatiques-des-travaux-de-restauration-menes-17-05-2019-12286439.php
Meghan Markle: Sei zita raMeghan rakanyora RACHEL pane chiziviso chokuberekwa checheche Archie?
Trump "yakabatanidzwa mukuvanda," Pelosi akaudza vatori venhau - Video - New York Times
22 05 AFRICA KUPINDURWA KWENYAYA - Vhidhiyo
Ayo Akinola acharasikirwa neUxNUMX World Cup, akatsiviwa naJulian Araujo
vhiki ye hillary clinton kusvuta, neboka rekununura - VIDEO
VANHU & VANHU3,729